Azonao atao ny manamboatra ny menio fizarana Android amin'ny Galaxy | Androidsis
Fampiharana mahafinaritra iray hafa izay entin'i Samsung amin'ny Home Up avy amin'i Good Lock ary izany dia ahafahantsika manamboatra ny menio fizarana an'ny Samsung Galaxy.
Eny ny Android fizarana menio izay matetika mikorontana tsara, Samsung dia mitondra antsika ity rindrambaiko tena tsara ity hanamboarana ireo hitsin-dàlana araka izay tadiavintsika, esory raha tiana ny hizara ny antsipirian'ny rakitra na handeha tanteraka amin'ny Shareby Share. Ataovy.
Ahoana ny fanamboarana ny menio fizarana Android amin'ny Galaxy
Tokony holazaina fa ny safidy marobe izay avelan'ny Good Lock amin'ny Samsung Galaxy dia goavana ary isika dia manolo-tena hanao zavatra na dia tsy manana tombontsoa ROOT azontsika atao aza; ary fantatray tsara izay lazainay.
Efa nampianatra izahay omaly ny fomba hanamboarana ny tondro ny S Pen na manendry feo mihitsy aza rehefa manovo azy (Ahoana ny fomba fiasan'ny jiro ao amin'i Luke Skywalker ao amin'ny Star Wars?). Fotoana izao ho an'ny menio Share miaraka amin'ny Home Up; fampiharana izay azonao sintonina avy amin'ny APKMirror, satria avy amin'ny Galaxy Store dia mety tsy hiseho akory ilay izy.
APK Home Up - marary mitsika
Vantany vao tafapetraka ny fampiharana (azonao atao ny mahita ireo fiasa rehetra ato amin'ity rindrambaiko ity avy amin'ny horonantsary navoakanay tao amin'ny fantsakanay Androidsis tao amin'ny YouTube), mankany amin'ny Good Lock isika ary avy eo mankany amin'ny Home Up. In Home Up Misafidy ny Share Manager izahay ary ho eo alohan'ny endri-javatra rehetra amin'ity fampiharana ity.
Eo an-tampony dia manana topy maso ny menio fizarana ary eto ambany ny safidy rehetra azonay ampiasaina. Manana ny antsipiriany momba ny fizarana data izahay mba hanafoanana ny mombamomba ny fizarana na ny safidy hanesorana ny fizarana Nearby mba hametrahana menio fizarana mazava kokoa sy mazava kokoa.
avy eo Mandeha amin'ny Show Direct Share izahay ary mamela anay hiditra amin'ny menio fanovana izay iasana io safidy io. Ny zavatra mahaliana dia ny miroso Safidio ny Share Applications hisafidianana ireo fampiharana 8 Izahay dia te hanana hitsin-dàlana avy amin'ny menio fizarana.
Izany no izy isika dia ho lasa tompo sy tompo amin'ireo sary masina 8 ireo ary tsy hamela ny Android hisafidy izay mety ho liana aminay izahay. Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ity fizarana fizarana ity ary manome fiainana be dia be azy io; miandry ny Android hametraka ny bateria amin'io heviny io ary miaraka amin'ny One UI 2.5 dia efa manana ny zava-baovao amin'ny Android 11 isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ataovy miavaka ny menio fizarana Samsung Galaxy miaraka amin'ny Home Up by Good Lock
Huawei dia hanolotra kinova fampihenana ny mpandahateny mahay